Soosaarayaasha Qaybaha Saadka iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadaha Qaybaha Saadka ee Shiinaha
360L Dustbin Cabbirka Qaybta: 867 X 751 X 1059 mm Cabirka caaryada: 1795X1695X1865 mm Miisaanka caaryada: 44345 kg Mashiinka: HT 3300T Xalka iyo sameynta sameynta boorka qashinka, sariirtaada, sariirta iwm Inta badan wasakhahaasi waxaa loo dhoofiyaa macaamiisha Yurub iyo America suuqooda. . Waqtigaan la joogo waxaan bixin karnaa culeys balaaran oo gaaraya ilaa 90T. Waxaan awood u leenahay in aan sameysano wasakhda wasakhda u dhaxeysa 40L illaa 3200L. Khibrad hodan ah ayaan helnay sanadba sanadka ka dambeeya, caaryaheena waxay lahaan karaan waqti wareeg deg deg ah iyo nolol waqti dheer ah. Waxaan bixin karnaa m ...
240L Dustbin Cabbirka Qaybta: 734 * 585 * 1034mm Cabirka caaryada: 1200 * 1350 * 1615mm Miisaanka caaryada: 20830kg Mashiinka Waxsoosaarka: 2500T Xalka iyo sameynta sameynta boorka qashinka, sariirtaada, sanduuqa iwm Inta badan wasakhahaasi waxaa loo dhoofiyaa macaamiisha Yurub iyo Ameerika suuqa. Waqtigaan la joogo waxaan bixin karnaa culeys balaaran oo gaaraya ilaa 90T. Waxaan awood u leenahay in aan sameysano wasakhda wasakhda u dhaxeysa 40L illaa 3200L. Khibrad hodan ah ayaan helnay sanadba sanadka ka dambeeya, caaryaheena waxay lahaan karaan waqti wareeg deg deg ah iyo nolol waqti dheer ah. Waxaan bixin karnaa ...
120L Dustbin Cabbirka Qaybta: 552 * 480 * 899 mm Cabirka caaryada: 1050 * 1100 * 1479mm Miisaanka caaryada: 13315kg Mashiinka Waxsoosaarka: 2400T Xalka iyo sameynta sameynta boorka qashinka, sariirtaada, sanduuqa iwm Inta badan wasakhahaasi waxaa loo dhoofiyaa macaamiisha Yurub iyo Suuqa America. Waqtigaan la joogo waxaan bixin karnaa culeys balaaran oo gaaraya ilaa 90T. Waxaan awood u leenahay in aan sameysano wasakhda wasakhda u dhaxeysa 40L illaa 3200L. Khibrad hodan ah ayaan helnay sanadba sanadka ka dambeeya, caaryaheena waxay lahaan karaan waqti wareeg deg deg ah iyo nolol waqti dheer ah. Waxaan bixin karnaa ...
110L Dustbin Cabbirka Qaybta: 552 * 480 * 899 mm Cabirka caaryada: 1050 * 1100 * 1479mm Miisaanka caaryada: 13315kg Mashiinka Waxsoosaarka: 2400T Xalka iyo sameynta sameynta boorka qashinka, sariirtaada, sanduuqa iwm Inta badan wasakhahaasi waxaa loo dhoofiyaa macaamiisha Yurub iyo Suuqa America. Waqtigaan la joogo waxaan bixin karnaa culeys balaaran oo gaaraya ilaa 90T. Waxaan awood u leenahay in aan sameysano wasakhda wasakhda u dhaxeysa 40L illaa 3200L. Khibrad hodan ah ayaan helnay sanadba sanadka ka dambeeya, caaryaheena waxay lahaan karaan waqti wareeg deg deg ah iyo nolol waqti dheer ah. Waxaan bixin karnaa ...